Pregnancy – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. Amniotic Fluid Embolism အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. Amniotic Fluid Embolism ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေက ကလေးမီးဖွားချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးမီးဖွားပြီးချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် ရေမြွှာရည်က အမေရဲ့ သွေးထဲမှာ လေပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးတော့...
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ကလေးမွေးပြီး ဆီးချိုထိန်းရတဲ့အခါ မိခင်တွေက ကလေးမွေးပြီးတော့ ဆီးချိုဖြစ်လို့ ဆေးတွေသောက်တယ်၊ အစားအသောက်နဲ့ ထိန်းတယ်ဆိုတော့ ကလေးကို နို့တိုက်တဲ့အခါ ကလေးက အာဟာရလုံလုံလောက်လောက် မရတာမျိုးဖြစ်နိုင်လားလို့ တွေးပူတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိခင်ကို အချိုမပါတဲ့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းနှင့် အာဟာရ (၂)
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း – ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုရှိရင် ကလေးကိုရော ထိခိုက်နိုင်သလား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုရှိတာကို မသိလိုက်လို့ ကုသမှုမခံယူလိုက်ရဘူးဆိုရင် ကလေးမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေဖြစ်ပြီး မွေးလာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ Bifida လိုမျိုး ရောဂါဖြစ်ပြီး မွေးလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း...
သားသမီးရရှိအောင်အမြဲကျန်းမာလန်းဆန်းနေစေဖို့ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာတွေစားသင့်သလဲ …
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့တာလုံး အစာတွေကို အချိန်ကိုက်စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနရီဟန်ချက်ညီပြီး စွမ်းအင် အပြည့်ရှိကာ စိတ်ခံစားချက် ကောင်းမွန်နေပါလိမ့်မယ်။ (၁) ပေါင်ချိန်ကြည့်ပါ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်းတာ ၊ များလွန်းတာက အမျိုးသားသုက်ပိုးအပေါ်မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်များလွန်း၊နည်းလွန်းတာက အမျိုးသားရဲ့ လိင်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်...
ကိုယ်ဝန် ပထမ သုံးလပတ်မှာ အိုမီဂါ၃ ဖက်တီးအက်စစ်မှီဝဲပါ။ကိုယ်ဝန်ကာလတစ်လျှောက် လမ်းကြာကြာလျှောက်ပေးပါ။ ကိုယ်ဝန် ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပါ၊ ခြေထောက်ကို ဆတ်ခနဲလှမ်းပြီးအကြောလျှော့ပါ။အစိမ်းရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင်အစားအသောက်တွေစားပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်တတိယ သုံးလပတ်မှာ ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်- တစ်နေ့ စွံပလွံသီး ၆ လုံးစားပါ။ ကိုယ်ဝန် ၃၀ပတ်-...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းနှင့် အာဟာရ (၁)
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုအကြောင်း ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးဆီးချိုရောဂါအကြောင်း ပြောရပါမယ်။ ဆီးချို ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့ သွေးထဲမှာ ဂလူးကို့စ်လို့ခေါ်တဲ့ အချိုဓာတ်များလို့ပါ။ ဂလူးကို့စ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အာဟာရအနေနဲ့ အသုံးချတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်ဆူလင်ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးလိုပါတယ်။ အင်ဆူလင်ကို မုန့်ချိုအိတ်က...
မေး ။ ရေမြွှာနည်းတယ်ပြောလို့ပါ။ ရေမြွှာများအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရပါသလဲရှင်။ ၆လပိုင်းတုန်းက ရိုက်ထားတာ ရေမြွှာက ၁၄ ရှိတယ် ပြောပါတယ်ရှင့်။ မနေ့ပြန်ရိုက်ခိုင်းတော့ ရေမြွှာက ၉ပဲရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အိုဂျီက ၉လပိုင်း ၄ရက်နေ့ထိ စောင့်ပေးမယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ မမွေးသေးရင် ခွဲမွေးမယ်ပြောပါတယ်။...